သငျသညျအစဉျအမွဲဝါးစောင်၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ? ဒါဟာနှစျသိမျ့စာရေးကမ်းလှမ်းကြောင်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစောင်ကသင်၌ snuggle မှအဘို့ကြီးစွာသောအပျြောအပါးစေသည်အစွန်းရောက်ပျော့ဝါးဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။
ဝါးစောင်ကြောင့်ပိုကောင်းနှစ်သိမ့်ကမ်းလှမ်းကြောင်း၎င်း၏နူးညံ့မှုအများအပြားအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဝါးက၎င်း၏ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများအဘို့အကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာသဘာဝကပေးတဲ့ antibacterial အေးဂျင့်ဖြစ်သည့်ဝါး Kun, ပါဝင်သည်။ ဒါဟာကျန်းမာရေးကိုအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်ကြောင်းဘက်တီးရီးယားနှင့်ပိုးမွှားသတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစ bug တွေ, မှိုများနှင့်တာမျိုး repels ။ ဤအစောင်တစ်ဦးကျန်းမာအဆင်ပြေ option ကိုမှန်ကန်စေသည်။
ဝါးဖိုင်ဘာထိုကဲ့သို့သောနိုင်လွန်ခြင်းနှင့် polyester အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်စေအမျှင်တစ်ဦးအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထည် breathable ဖြစ်ပါတယ်အလွန်အမင်းပျော့စောင်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာသိပ်မြင့်မားစုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ breathable အရည်အသွေးကိုချွေး၏ရေငွေ့ပျံအားပေးကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်အနံ့စုပ်ယူ။ ဒီ feature ကနွေးများနှင့်အဆင်ပြေသူတို့ရဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရန်လိုသူမိခင်များ, များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။
ဝါးစောင်ဆွဲဆောင်မှုအရောင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ သငျသညျတက်ကြွအရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတစ်အကွာအဝေးကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျသွားလာနေစဉ်အသေးစားအရွယ်အစားစောင် snug နှင့်နွေးထွေးသောသင့်ရဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစားစောင်အပိုသက်သာခြင်းနှင့်ဇိမ်ခံချင်သောသူတို့က, အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအစွန်းရောက်ပျော့ပျောင်းသက်သာစောင်လုံးကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးပြုမှုအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်စက်များတွင်နွေးရေနှင့်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့ရေရှည်တည်တံ့ရေးတို့အတွက်မှတ်ချက်ချတဲ့သဘာဝကြီးထွားလာစက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ကခုတ်လှဲသည်ဆိုပါကအလွယ်တကူအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလျင်မြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးမှုစက်ရုံဖြစ်သည်။ ဒါဟာကြီးထွားဖို့ပိုးသတ်ဆေးမလိုအပ်ပါဘူး။ ဝါး 40% အပိုအောက်စီဂျင်ပေးပြီးလေထဲကအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ဝါးတို့သည်ကြီးစွာသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ option ကိုစောင်ပါစေ။
ဝါးစောင်ဒြပ်အမျှင်မှအထိခိုက်မခံနေသောသူတို့ကိုများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ breathable feature ကိုနွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ကြောင့်စံပြစေသည်။ ဒါဟာသင်ဆောင်းရာသီအတွက်နွေးခံစားရစေသည်နှငျ့သငျပူသောနွေရာသီအတွင်းအအေးစောင့်ရှောက်။
ဤသည်ဖိုင်ဘာဝါဂွမ်း၏အစွမ်းသတ္တိ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားစွမ်းရည်, သာလွန်စုပ်, တောက်ပချောမွေ့နှင့်အဆင်ပြေနှင့် bug နဲ့တာမျိုးတွန်းလှန်စွမ်းရည်ကဲ့သို့အခြားအံ့သြဖွယ် features တွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ ဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အဆိုပါစောင်လူကြိုက်များသောအပန်းဖြေစခန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဧည့်သည်များမှအဆုံးစွန်နှစ်သိမ့်ပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏ကြောင်းဇိမ်ခံဟိုတယ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့စောင်၏စျေးနှုန်းအရွယ်အစားအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထိုအစောင်ပုံမှန်စောင်ထက် ပို. စျေးကြီးတယ်သော်လည်း, သူတို့သည်အဆုံးစွန်နှစ်သိမ့်ကိုဆက်ကပ်။